ThutaStar - Page 397 Of 540 - Welcome From ThuTaStar
February 4, 2019 Thuta Star 0
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းဟာ fb ထဲကနေ ရည်းစားဖြစ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ အပြင် မှာ ချိန်းတွေ့ ဖို ဖြစ်လာတယ် ကောင်မလေးနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ နေရာကိုရောက်တော့ အဲဒီကို တန်းမသွားပဲ မလှမ်းမကမ်းကနေကောင်မလေးရဲ့ အဝတ်အစား ရုပ်ရေ ခန္ဒာကိုယ်အနေအထား စတာတွေကို အကဲခတ်နေပါတယ် ခဏနေကျတော့ ကျွန်တော့် […]
အနုပညာလောကထဲကို သရုပ်ဆောင်အဖြစ် တကျော့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ခင်လွှမ်းဟာ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲဖျော်ဖြေလေ့ရှိပါတယ်။ ဖိုတိုမော်ဒယ်အဖြစ်အနုပညာလောကထဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုပါ ရိုက်ကူးခွင့်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လွှမ်းဟာ သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့အချစ်ရေးလေးကို တည်ဆောက်ထားပြန်ပါသေးတယ်။ ချစ်သူနဲ့အတူ အမြဲပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ခင်လွှမ်းတို့အချစ်ရေးဟာလည်း ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းနေမယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုပါဘူးနော်။ […]
ကားပါကင်ကိစ္စ အချင်းများရာမှ ပရဟိတဆေးခန်း ဆရာဝန် လူသတ်မှုဖြစ် 03-Feb-2019 ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းရှိ မြန်မာပလာဇာနှင့် မီလီယာဟိုတယ်ကြားတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက် နံနက် ၁ နာရီက ကားပါကင်ကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသေဆုံးခဲ့သောကြောင့် ပရဟိတဆေးခန်း ဆရာဝန် ကို […]
ခရီးသွားများသတိထားကြပါရန် (ရွှေကူ-မန္တလေးလမ်း) ခရီးသွားကားများ အမြန်လမ်းမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဒုက္ခဖြစ်သွားသူတွေရှိကြတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် နေပြည်တော်ကို ဒီရက်ပိုင်းခရီးသွားတယ် အသွားအပြန်ညကားမောင်တယ် အန္တရာယ်ကင်းစွာ မန္တလေးပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။ မိသားစုများဖြင့် မန္တလေးမှ ရွှေကူအပြန် ည ၉ နာရီအချိန် မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၂ မိုင် ၂ ဖာလုံ […]
“ ဖောက်ပြန်တဲ့သူကို ပစ်ထားပြီး ပိုလှအောင်နေပါ ”
ဖောက်ပြန်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေချည်းပဲ ကြားကြားနေရလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ချစ်သူ၊အိမ်ထောင်ဘက်က အခြားတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင်အသဲနာပြီး ဒေါသတွေထွက်၊ အပြစ်တွေအပြန်အလှန်တင်၊ရန်ဖြစ်၊အအ်ိပ်ပျက်အစားပျက်ပြီးရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ သေချင်လောက်အောင် စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ကြရပါတယ်၊အချို့ဆို ဘ၀ပျက်၊အနာဂတ်မဲ့တဲ့အထိ ဖြစ်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ ကျမအနေနဲ့အဲဒီလို မဖြစ်ကြစေလိုပါဘူး။ အရေးကြီးတာကတော့ ဖောက်ပြန်ခံရတဲ့အခါကိုယ့်အတွက် စိတ်ရောရုပ်ပါ ထိခို်က်မှု နည်းပါးစွာနဲ့ အလှမပျက်၊ ဘ၀မပျက်ဘဲနဲ့ ရှင်သန်နို်င်ဖို့ပါပဲ။ တကယ်တော့ ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေက […]
ရွှေမှုံရတီရဲ့ချစ်လှစွာသော ညီမလေးငွေမှုံရတီဟာ အစ်မဖြစ်သူလိုပဲ အနုပညာကို ဝါသနာကြီးပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံနဲ့ငွေမှုံနဲ့ညီအစ်မက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တော်တော်လေးချစ်ကြပြီးဘာမဆိုတိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့ ညီအစ်မတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ငွေမှုံရတီဟာလည်း ရွှေထူးနဲ့ရွှေမှုံကိုသဘောတူတဲ့သူတွေထဲမှာပါပါတယ်။ ငွေမှုံက မကြာသေးမီက မီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ရွှေထူးနဲ့ရွှေမှုံအကြောင်းကိုပြောပြသွားပါတယ်။ ရွှေထူးနဲ့ရွှေမှုံကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်ကြပြီး တော်တော်လေးပြုံးပျော်နေကြတာပဲဆိုပြီး ငွေမှုံက “သူတို့ကိုကြည့်ရတာ ပျော်ပါတယ်။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ။ နှစ်ယောက်လုံးက ပြုံးပျော်နေပြီးတော့ Happy ပေ့ါနော်။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ […]
အိပ်နေစဉ်အတွင်း အမြင့်တစ်ခုခုပေါ်ကပြုတ်ကျသလို၊ ချော်လဲသလိုမျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဆတ်ခနဲတုန်တက်လာရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေခဏ၊ ခဏဖြစ်တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြေကို ဒီဆောင်းပါးလေးကနေတစ်ဆင့် စာဖတ်ပရိတ်တို့နားလည်သိရှိရအောင် ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်။ တော်တော်များများက တစ်ခုခုနဲ့တိုက်မိသလို၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကရိုက်လိုက်သလိုမျိုးနဲ့ တစ်နေရာရာက ပြုတ်ကျသလိုမျိုးကြောင့် အိပ်နေရင်းဆတ်ခနဲ တုန်သွားတတ်ကြပေမဲ့ တချို့တလေကတော့ တစ်ယောက်ယောက်က တက်ဖိထားသလို၊ ညှစ်ထားသလိုမျိုးကြောင့် တုန်တတ်ကြပါတယ်။ […]
အပျို မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတွေကို လူပျိုတွေ ထက် ပိုစွဲလမ်းကြတာ ဒါ့ကြောင့်တဲ့ !!!
February 3, 2019 Thuta Star 0
မိန်းကလေးတွေက လူပျိုထက် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းကို စွဲလမ်းမိတာဘာကြောင့်လဲ ? ၁။ လူပျိုတွေထက် အိမ် ထောင်သည်ယောကျာ်းကပိုစီးပွားရှာနိုင်တယ်ထင်လို့ လား တကယ်က စီးပွားရှာနိုင်တယ် မရှာနိုင်ဘူးဆိုတာ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ လူပျိုထက် စီးပွားရှာနိုင်အားနည်းလို့ မိသားစုအဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်သည်တွေအများကြီးရှိပါတယ် ။ ဒီတော့တွေးရမှာက အပျိုတစ်ယောက်အနေနဲ […]
သူမနဲ့ဆုံတိုင်း ဖြစ်နိုင်ရင်အချိန်တွေ ရပ်တန့်ထားချင်တယ် ဆိုပြီး ရိုဆန်နေတဲ့ စုံတွဲပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်
မော်ဒယ်၊ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်နဲ့ မင်းသမီးချောလေး ပိုးကြာဖြူခင်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေကိုယ်စီ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ် အားပေးခြင်းခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်က အခုတော့ ပရိသတ်တွေကို အံ့အားသင့်စေမယ့်အရာတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့နှစ်ဦးက ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ စုံတွဲပုံရိပ်လေးတွေကို […]
အောက်စလွတ်နေတဲ့ကောင်မလေး နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်မိသောအခါ တနေ့ကပေါ့ ဘဏ်မှာ ငွေသွားထုတ်တာ မှတ်ပုံတင် ပေးပြီး အလှည့် မရောက်ခင် ခဏ ထိုင်စောင့်နေ ရတယ် ။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုံတန်းမှာ အမျိုးသမီးတွေချည်း ဆိုတော့ တဖက် ခုံတန်းမှာ ဝင်ထိုင် မိတယ်။ ယောက်ျားသား ဆိုလို့ […]
« 1 … 396 397 398 … 540 »